Ihe Ntụgharị MP4 na Oyiri Foto Fixer Pro, n'efu na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ n'efu maka obere oge | Esi m mac
Ọ bụ ugbu a Tuesday, ụbọchị na-aga ngwa ngwa dị ka egwuregwu na ngwa na-emekọ na Mac App Store. Na Esi m mac Anyị na-ama ọkwa ọhụụ ọhụụ na anyị na-agbasi mbọ ike ka gị onwe gị wee nwee ike iji ha. N'ihi nke ahụ Taa, m na-ewetara gị ngwa abụọ, otu n'efu, na nke ọzọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ n'efu, ma ha bara ezigbo uru: MP4 Ihe Ntụgharị y Oyiri Foto Fixer Pro.
Ọzọkwa m siri ọnwụ na ihe na-amasị m mgbe niile ịchọpụta, ọ bụ maka obere oge na-enye. Ana m ekwu ya ebe a, m na-ekwu ya na aha m na-ekwu ya na ngwa ọ bụla mgbe m na-ekwu maka ha. Gịnịkwa ka nke ahụ pụtara? Ọfọn, dị mfe, na onyinye ndị a anaghị adị ruo mgbe ebighị ebi na na anyị nwere ike ijide n'aka na ọ dị mma n'oge anyị na-ebipụta akwụkwọ a, agbanyeghị, ọ bụrụ na obere oge ka onye nrụpụta wepụrụ onyinye ahụ, anyị enweghị ike ịme ihe ọ bụla iji gbochie ya. Ya mere, cheta, ọ bụrụ na ị nwaa ịnweta ịnweta ma ị nwekwaghị ike ịchọta ya, ọ dịghị onye na-aghọ gị aghụghọ, ị ga-adị ngwa ngwa n'oge ọzọ. Ọ bụ "egwuregwu" nke Storelọ Ahịa Ngwa, ọ bụ ezie na mgbe ụfọdụ karịa egwuregwu ọ dị ka pu ... ọrụ.
1 MP4 Ihe Ntụgharị
2 Oyiri Foto Fixer Pro
MP4 Ihe Ntụgharị
Maka ndị na-anọghị oge na "Ntụgharị Super MOV maka Mac", dị ka ndị na - agụ akwụkwọ anyị Mike na Pedro (ka anyị lee ma ị bịaghị n'oge ọzọ), taa, ewetara m gị ngwa yiri nke a n'ihi na ọ bụkwa file Ntụgharị maka Mac. Dịka m kwuru n'oge ụfọdụ, ọ bụ ụdị ngwa dị n'ụba na Mac App Store, ma ọ dị obere izu nke enweghị otu n'efu ma ọ bụ jiri ego dị ukwuu.
con MP4 Ihe Ntụgharị ị ga-enwe ike «tọghata vidiyo ọ bụla na AVI, MOV, WMV, FLV, MKV ka MP4 (4K gụnyere) […] na vidiyo ndị ọzọ n'ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ usoro ọ bụla na-ewu ewu, gụnyere MP4, WEBM, wdg. vidiyo na MP3, M4A, audiodị ọdịyo, wdg ". N'ụzọ dị otú a, ị nwere ike ịlele vidiyo ụlọ gị ma ọ bụ vidiyo nke ebudatara na ịntanetị na ihe ọ bụla ngwaọrụ sitere na iPhone, iPad, Apple TV, na smartphones na mbadamba Samsung, HTC, LG, Sony na ndị ọzọ.
Ntughari "Ultra ngwa ngwa na-enweghị ọnwụ mma".
Wdị usoro dịgasị iche iche na-akwado ntinye na ntinye: WMV, AVI, MOV, FLV, MKV, WEBM, MP4, MXF, MTS, M2TS, MOD.
Ị nwere ike wepụ odiyo nke vidiyo dị iche iche: MP3, AAC, AC3, AIFF, AMR, AU, FLAC, M4A, MKA, MP2, OGG, WAV, WMA ...
Nwere ike bugharia video idowe ya na mmasi gi na uzo obula a kwadoro: uzo a na-agbanye uzo na ntughari anya, 90º na-aga elekere na imeghari.
Nhọrọ video mbipụta: nchapụta, iche, saturation, hue na olu, ọnụego etiti, mkpebi, akụkụ akụkụ yana ọnụọgụ ụda, encode, ọnụego nlele ...
MP4 Ihe Ntụgharị Ọ nwere ọnụahịa mbụ nke euro 14,99 ma ugbu a ọ bụrụ na ị mee ọsọ ọsọ ma bịarute tupu onyinye ahụ agwụ ị nwere ike nweta ya kpam kpam free.
Oyiri Foto Fixer Pro
Ma ugbu a, anyị na-aga na ngwa nke anaghị akwụ ụgwọ, mana ọ bụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ n'efu ebe ọ bụ na ọnụahịa ya bụ 18,99 euro, mana ugbu a na ruo echi bụ Machị 15 ị nwere ike nweta ya maka naanị 0,99 euro ekele maka mkpọsa "Mac App Store Sale" na ụbọchị abụọ ọ bụla na-ewetara anyị ụgwọ ịkwụ ụgwọ maka ihe na-erughị otu euro.
Oyiri Foto Fixer Pro bụ ngwá ọrụ bara uru nke, dịka ị nwere ike icheworị site na aha ya, i scanomi foto na kọmputa gị na "ihichapụ oyiri ma ọ bụ yiri foto dabere na kenha larịị ị na-ahọrọ".
Ngwa a na - arụ ọrụ ma foto site na ochie iPhoto na ngwa dị ugbu a Foto, ihe oyiyi echekwara na draịvụ mpụga ma ọ bụ draịvụ ike nke Mac gị, na-atọhapụ gị "ọtụtụ ohere diski site na ihichapụ ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke foto yiri oyiri na otu pịa."
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Mmemme Mac » Ihe ngbanwe MP4 na oyiri Foto Fixer Pro, n'efu na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ n'efu maka obere oge
The 2016 MacBook Pro bụ ugbua na weghachiri eweghachi ngalaba na Spain